Salaamanews » 2013 » January » 05
Home » Warbixin iyo muuqaal: Raafka Kenya iyo Soomaalida oo bilowday in ay dib ugu noqdaan dalkooda
(Salaamanews)-Dhawaan madaxda Kenya ayaa soo saaray amar adag oo la duldhigay dadka Soomaaliyeed ee qaxa ku jooga gudaha dalkani Kenya, waxaana Soomaalida lagu amray inay ku laabtaan dalkooda ama xirada Dhadhaab.
Amarka Kenya ayaa waxaa ka gadooday Soomaali badan oo durba dalka Soomaaliya ku noqday, waxaana carada ka dhalatay hadalka Kenya ay keentay in Soomaalidu ay maal gashigoodii si tartiib ah... Tags: maqaallo, warar Ururrada siyaasadda Puntland oo wajahaya shuruudo adag
(Salaamanews)-Xisbiyadda shuruudaha soo buuxiyay ee loo aqoonsaday kuwa ka qeyb gali doona doorashada maamulka Puntland ayaa Sabtida maanta ah la kulmay guddiga doorashada kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka Puntland.
Guddiga KMG ah ee doorashada ee maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe kula kulmay lixda urur siyaasadeed ee ka soo gudbay shuruudihii la hordhigay ee ay uga mid noqdeen xisbiyada... Tags: warar Gudoomiyeyaasha guddiyada baarlamaanka oo la doortay
(Salaamanews)-Xildhibaannada Soomaaliya ayaa Sabtida maanta ah kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxay ku doorteen gudoomiyeyaasha guddiyadii dhawaan la dhisay.
Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa doortay guddoomiyeyaasha, ku-xigeennada iyo xubnaha kale ee guddiyada baarlamaanka, iyagoo dhawaan gali doona fasaxooda shaqada.
Kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay... Tags: warar Dhagaxtuur “Taraafiko la’aan dalku ma hagaagayo”
(Salaamanews)-Waxaa Sabtida maanta ah magaalada Muqdisho lagu qabtay xaflad shahaadooyin sharafeed lagu guddoonsiinayay qaar ka tirsan baliiska qaabilsan nabadgelyada waddooyinka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Maxamed Cismaan Cali Dhagaxtuur ayaa 20 askari oo ka mid ah baliiska nabadgelyada wadooyinka guddoonsiiyay shahaadooyin lagu aqoonsanayay kartidooda iyo dadaalka ay u galeen inay xaqiijiyaan... Tags: warar AMISOM oo sheegtay in sanadkii hore uu dhintay magaca Al-shabaab
(Salaamanews)-Sanadkii tagay ee 2012, oo kooxda Al-shabaab laga qabsaday magaalooyin muhiim ahaa ayaa taliska AMISOM, wuxuu sheegay in la wiiqay ururka Al-shabaab ee ka dagaallama dalka Soomaaliya.
AMISOM ayaa ku tilmaamtay sanadkii tegay ee 2012 mid horumarro badan laga sameeyay xaaladda dalka Soomaaliya, iyadoo si gaar ah u sheegtay in sanadkii tegay la wiiqay awoodda kooxda Al-Shabaab.
Major Henry... Tags: warar Dabley hubeysan oo weerartay wasiirka amniga Puntland
(Salaamanews)-Dabley hubeysan ayaa Sabtida maanta ah weerartay Hotelka uu deganyahay wasiirka amniga Puntland, waxaana la sheegay dableydu inay baxsadeen markii ay weerarka soo qaadeen kadib.
Dableyda oo aan la garaneyn heybtooda iyo halka ay ka yimaadeen ayaa xalay weerartay hoteel uu ku sugnaa wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan.
Kooxda oo ku hubaysneyd qoryaha daran-dooriga u dhaca ayaa... Tags: warar Ciidamada huwinta ah oo billaabay dagaal jubada hoose iyo Gedo looga saarayo Al-shabaab
(Salaamanews)-Ciidamada Al-shabaab ayaa cabsi uga baxay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacan military ka helaya xoogaga Itoobiya ee jooga koofurta Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano aan sidaa uga fogeyn Baardheere, halkaasoo difaacyo ay... Tags: warar Two Somalis die in attack on refugee camp in Kenya
(Salaamanews)-Two youths died and several people were wounded during a grenade attack at a refugee camp in eastern Kenya near Somalia on Friday, an AFP journalist and police said.
The AFP journalist viewed two bodies, while the Red Cross said on its Twitter account that seven people had also been wounded in an attack on a restaurant in the Dadaab refugee camp complex, the world’s biggest, which lies... Tags: news Isticmaalka baraha bulshada isku-xira oo Soomaalida dhexdeeda ku sii xoogaysanaya
(Salaamanews)- Dunida horumartay ee lagu naaneyso “Dunida koowaad” waxaa ay ku horumartay isticmaalka adeegyada casirga oo qaab nabadeed loo hirgaliyay, waxaana adeegyadaasi qaarkood u muuqdaan inay soo gaarayaan dadka ka hooseeya saxaraha gaar ahaan dalka Soomaaliya.
Shantii sano ee ugu dambeysay gobollo kamid ah Soomaaliya waxaa ka hirgalay isticmaalka adeegyada dunida koowaad la jaanqaadi karo,... Tags: maqaallo, warar Yuusuf Xaaji “Madaxda Kenya iskuma raacsana in Soomaalida dib loo celiyo”
(Salaamanews)-Wasaaradda gaashaandhiga dalka Kenya ayaa sheegtay inaanay is quseyn amniga Kenya iyo Soomaalida dalkooda ku noqonaya, waxaana dowladda Kenya ay sheegtay inaan leysku raacin dib u celinta qaxootida Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi.
Wasiirka Gaashaandhiga dalka Kenya mudane yuusuf Xaaji, oo ka hadlay kulan uu la qaatay ganacsatda Soomaaliyeed ee dalka ayuu sheegay in golaha wasiirada... Tags: warar Next »	Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »